Suuqa: Wararkii Ugu Dambeeyay Maanta & Xanta Suuqa – Garsoore Sports
Mundo Deportivo ayaa warinaya in kooxda Leicester City ay ka fiirsaneyso u dhaqaaqista laacibka ka takhalussan Barca ee Philippe Coutinho. Tababare Brendan Rodgers ayaa riixaya heshiiskan kaddib markii ay xiddigan kasoo wada shaqeeyeen Liverpool.
Atletico Madrid ayaa isha ku heysa Hakan Calhanoglu si ay ugu beddesho bartilmaameedka kale, xiddiga Udinese Rodrigo de Paul. Kooxda heysata horyaalka LaLiga ee Atletico ayaa dooneysa De Paul, kaasoo sidoo kale lala xiriirinayo Juve, Inter iyo Leeds United. Haddii ay waayaan laacibka reer Argentina, Calhanoglu ayaa ah dookh – heshiiska xiddigga Milanna wuxuu dhacayaa dhammaadka Juun.
United ayaa wadahadalo dheeri ah la yeelatay Borussia Dortmund iyagoo ku raad jooga Jadon Sancho, ayuu yiri Fabrizio Romano. Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay dooneyso € 95 milyan inkastoo United aysan haatan dooneynin inay bixiso wax ka badan € 70m. Liverpool iyo Chelsea ayaa sidoo kale horay loola xiriirinayay xiddigan.
Fabrizio Romano ayaa sidoo kale soo wariyay Gianluigi Donnarumma qandaraaska uu kula jiro Paris Saint-Germain ilaa iyo 2026 la isku raacay. Goolhayaha heerka caalami ee dalka Italy ayaa qarka u saaran inuu si bilaash ah ugu biiro PSG kaddib markii uu dhamaaday heshiiskiisii Milan.
Sida laga soo xigtay Corriere dello Sport, Milan ayaa wadahadalo kula jirta labada ciyaaryahan ee Real Madrid Brahim Diaz iyo Alvaro Odriozola. Rossoneri ayaa sidoo kale lala xiriirinayay Luka Jovic waxayna umuuqataa inay diyaar u tahay inay hesho saxiixa joogtada ah ee Fikayo Tomori oo ay sidoo kale Chelsea kala soo wareegto.